I-United States ibeka inqanaba lokundwendwela kwihlabathi elitsha
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » I-United States ibeka inqanaba lokundwendwela kwihlabathi liphela
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Caribbean • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • abantu • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo
I-United States ibeka inqanaba lokundwendwela kwihlabathi liphela.
Emva kokufumana amanqaku amahle kutyalo-mali, uMgangatho woBomi kunye neeNdawo zokuHamba eziPhuculweyo, i-USA ihleli phezulu etafileni, kodwa ayiphumelelanga kuyo nayiphi na i-Index.
I-United States yaseMelika ibekwe kwindawo yeshumi kwi-Index ye-Mobility Index, ye-10 kwi-Index yoTyalo-mali, nakwi-4 kwi-Index of Life Index.
Ukuba ukhetha ukuhamba okuPhuculweyo kunye nee-Index zoTyalo-mali, zombini ziya kuphakanyiswa yiSingapore.
Ilizwe eliphambili kuMgangatho weNkcazo yoBomi yiSweden.
Uluhlu lwencwadana yokundwendwela yakudala yaphulwe. Ukufikelela kwilizwe, ngaphandle kwe-visa, kubalulekile, kodwa ngaba umgangatho wobomi, wengqesho, amalungelo oluntu kunye nezinye izinto ezininzi azinakudlala indima xa sidwelisa ezona passport zilungileyo?
Umphathiswa Wezangaphandle u-Riad Maliki we-State of Palestine kunye ne-Foreign Affairs u-Mark Brantley wase-St Kitts no-Nevis batyikitye isivumelwano sokungahlawulelwa i-visa kwisikhumbuzo sama-60 sombutho ongahambelaniyo eSerbia kule veki.
Iingcali zokuhamba ziphinde zavavanya amawaka emithombo yolwazi, zidibanisa idatha ebalulekileyo, kubandakanya ukufikelela kwi-visa simahla, kodwa ukongeza ukuhamba, ithuba lotyalo-mali kunye nomgangatho wobomi obonelelwa yindawo nganye kwindawo entsha, yobomi obongeza esidlulileyo. uluhlu lwakudala. Ilungelo lendlela engena-visa kodwa yinxalenye yexabiso layo nayiphi na indawo ekuyiwa kuyo, le Index yePasipoti ihambelana nedatha kwaye ibeka amazwe ngendlela ebanzi.
Ukufaka uluhlu lwabahlalutyi abanamava kwimibutho yamanye amazwe, behlalutya iiprojekthi ezinkulu zedatha ye-UNESCO, i-OECD, kunye neBhanki yoPhuculo yaseMelika. okanye iinjongo zobumi bobabini ngokusebenzisa izalathiso ezizimeleyo ezintathu: Ukuphuculwa kwesalathiso sokuhamba, isalathiso sotyalo mali, kunye noMgangatho weSalathiso soBomi.
Isalathiso ngasinye senza ukuba abasebenzisi bakwazi ukucoca iziphumo ngokwamanqanaba elizwe ngalinye, kusetyenziswa izikhombisi ezili-11 ezahlukeneyo ezivela kwimithombo eyaziwayo enje KwiQumrhu loQoqosho loLuntu, Gallup, kunye IZiko leYale loMthetho weNdalo kunye noMgaqo-nkqubo.
Iipasipoti eziphezulu ezili-10 zibekwe kwi-Global Passport Index ngokulandelelana:
I-United States yaseMelika ibekwe kwindawo yeshumi kwi-Index ye-Mobility Index, ye-10 kwi-Index yoTyalo-mali, nakwi-4 kwi-Index of Life Index. Isalathiso ngasinye sinobunzima beepesenti ezingama-23 (Ukuhamba) ngama-50% (Utyalo-mali) ngama-25% (uMgangatho woBomi) kunye namanqaku angama-25, iGlobal Passport ibeke i-USA kwisikhundla.